Waa kuwee dalalka Africa ee laga ciidayo Maanta? | KEYDMEDIA ONLINE
Waa kuwee dalalka Africa ee laga ciidayo Maanta?
Al-Shabaab ayaa qeybaha ay ka maamusho dalka Soomaaliya waxay Maanta u tahay maalinta kowaad ee Ciidul Firdiga.
MUQDISHO, Soomaaliya - Afar wadan oo ku yaalla galbeedka Africa ayaa Maanta laga ciidayaa maalinta 1aad ee Ciidul Fitriga, iyadoo Caalamka intiisa kale aan wali laga arag Bisha Shawaal.
Dalalka Maanta laga ciidayo waxay kala yihiin Senegal, Mali, Niger iyo Ivory Coast, iyadoo qeybo kamid ah Soomaaliya, gaar ahaan degaanada ku jira gacanta Al-Shabaab dadka ku nool ay ciidayaan maanta.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in 8 qof oo ku ku sugan dhowr degaan oo Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya katirsan, iyadoo dowladda iyo Maamullada ay shaaciyeen in Maalinta berri ah la ciidayo, oo Maanta la soomayo, lana buuxinayo 30-ka maalmood.
Inta badan Ramadan-ka iyo Ciida waa kuwa la isku khilaafo Soomaaliya, oo dadka ay ku kala qeybsameen dhanka maamulka iyo Urur diimeedyada ka jira, oo aan ahayn kuwa isku xiran.